‘भारतको अमुल नेपालमा आयो भने नीजि क्षेत्रको ३० अर्ब लगानी डुब्छ’
काठमाडौं । भारतीय डेरी अमुलले नेपालमा प्लान्ट खोल्ने विषयले तरंगित बनेको नेपाली डेरी व्यवसायीले अमुल आए नीजि क्षेत्रको ३० अर्ब लगानी डुब्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राजधानीमा आइतबार आयोजित..
गोठमा आगलागी हुँदा १६ गाई मरे
पोखरा । मादी गाउँपालिका वडा नं १ सिक्लेसको गाईगोठमा आगलागी हुँदा १८ गाई मरेका छन् भने चार गम्भीर घाइते भएका छन् । आइतबार साँझ ७ बजेतिर गाईधनी कृतिमान गुरुङले गाईवस्तुलाई न्यानो..
आत्मनिर्भर बन्न किसानलाई ४० करोड रुपैयाँको प्याकेज
कास्की। किसानलाई कृषि पेशामा आत्मनिर्भर बनाउँदै व्यावसायिक र उद्यमी बनाउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेशमा ४०० नमूना फार्म स्थापना गरिने भएको छ। प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएबमोजिम कृषि, पशुपक्षी तथा..
गण्डकी प्रदेशमा एक गाउँपालिका एक कृषि फार्म, सरकारले शुरु गर्यो काम
गोरखा । गण्डकी प्रदेशका कृषि सहकारी तथा भूमिसुधारमन्त्री लेखबहादुर थापाले प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहमा नमूना कृषि फार्मको स्थापना गरिने बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)नगर कमिटी गोरखाले आज सदरमुकाममा आयोजना..
मनाङ पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरे स्याउ फर्म
मनाङ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमाली जिल्ला मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–१ भ्राताङमा एग्रो मनाङ प्रालिले स्थापना गरेको स्याउ फार्मको आज उद्घाटन गरे। सो अवसरमा उनले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गरिनुपर्ने बताए..
भोलिबाट खाद्य संस्थानले खसीबोका र च्याङ्ग्रा बेच्ने, बजार मूल्यभन्दा कति सस्तो ?
काठमाडौं । खाद्य संस्थानले दशैंका लागि काठमाडौंमा भोलीबाट खसी–बोका र च्याङग्रा बिक्री थाल्ने भएको छ । संस्थानका अनुसार आजदेखि तराईका खसीबोका र हिमालका च्याङ्ग्रा काठमाडौं भित्रिँदैछन् । बुधबार बेलुकासम्म हेटौैंडाबाट पहिलो..
मुस्ताङ । दशैंका लागि मुस्ताङबाट १६ हजार भेडाच्याङ्ग्रा बिक्री गरिएको छ । म्याग्दी, कास्की, बागलुङ, पर्वत, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, स्याङजा, काठमाडौं लगायतका व्यापारीले मुस्ताङबाट भेडाच्याङ्ग्रा खरिद गरेका हुन् । भेडाच्याङ्ग्रा खरिद..
हायात र सोल्टी होटलमा समेत मनाङको अर्गानिक आलुका परिकार
मनाङ । मनाङमा फलाइएका अर्गानिक आलुको माग देशका तीन तारे र पाँचतारे होटलहरुबाट आउन थालेको छ । काठमाडौंका हायात होटल, सोल्टी होटलमा समेत यहाँका आलुको परिकार बन्ने गरेको छ ।..
डेरी उद्योगबाट ३० हजारभन्दा बढी बेरोजगार युवालाई प्रत्यक्ष रोजगारी
पाल्पा । डेरी उद्योगले नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी बेरोजगार युवालाई प्रत्यक्ष रोजागरी दिएको छ । नेपालका करीब पाँच लाख किसानले दूध उत्पादन गरी रोजगार र स्वजरोगार बन्दै गएका छन् । पशुपालनतर्फ..
काठमाडौँ । बझाङका २५ वर्षीय सत्य थापा र काठमाडौँका २७ वर्षीय विशाल चौलागाईंलाई युवा अवस्थामा नै केही फरक पेशा, व्यवसाय गर्ने हुटहुटी जागी रहन्थ्यो। आ–आफ्नै पेशामा रहेका उनीहरुको मनमा एक..
कालिमाटीका थप ५२ स्टल खारेज, २५ वटालाई सफाइ
काठमाडौं । सरकारले कालिमाटी तरकारी बजारका ५२ स्टल खारेज गरेको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको बैठकले ती स्टलहरु खारेज गर्ने निर्णय गर्को कृषि तथा पशुपंक्षी विकास..
कृषि पेशा छोडेर उद्योगमा आकर्षण
दाङ । जिल्लामा व्यवसायीको साना उद्योगतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको छ । विभिन्न बैंकले व्यापार तथा उद्योगमा सहजै लगानी गर्न थालेपछि साना उद्योगमा नागरिकको आकर्षण बढेको हो । जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५..
आँपले बजार नपाउँदा किसान चिन्तित, बजारमा भारतीय आँपको बिगबिगी
सुर्खेत । भेरीगंगा नगरपालिका–१३ रामघाटका प्रेम वली आँप बिक्री नभएपछि चिन्तित भएका छन् । उत्पादन भएको आँपले बजार नपाएपछि उनलार्इ चिन्ता भएको हो । उनले भने ‘गत वर्ष आँप बेचेर..
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले दुग्ध उत्पादक कृषकले प्रत्यक्षरुपमा पाउने गरी अनुदान दिन शुरु गरेको छ । महानगरले दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, दुग्ध संकलन केन्द्र र निजी डेरीमार्फत कृषकलाई प्रतिलिटर २५ पैसाका..
गोरखाका गाईपालक पन्त बने सर्वोत्कृष्ट किसान
ललितपुर । गोरखास्थित पालुङटार नगरपालिका–७ का किसान राजेन्द्रराज पन्त यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट किसानका रुपमा पुरस्कृत भएका छन् । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले स्थापना गरेको ‘राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार’ बुधबार..
कालिमाटीका व्यापारीको बर्गीकरण: ९९ व्यवसायीले रातो स्टीकर पाए
काठमाडौं काठमाडौंको कालिमाटीस्थित कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका व्यवसायीलाई चार भागमा बर्गीकरण गरिएको छ । किसान, व्यापारी र कृषि बजार निर्देशनालयको बोर्ड बैठकले व्यवसायीहरुलाई चार भागमा बर्गीकरण गर्दै चित्तबुझ्दो जवाफ नआए..
कुखुरामा बर्डफ्लु देखियो, कुखुरा र हाँस धमाधम मारिदै
चितवन।चितवनमा बर्डफ्लु देखापरेको छ । खैरहनी नगरपालिका–९ सुर्तनीका स्थानीय किसान राजन चौधरी र लक्ष्मण चौधरीले पालेको कुखुरामा बर्डफ्लु (एभिएन इन्फ्लुएन्जा एच फाइभ एन वान) देखिएको हो । राष्ट्रिय पक्षी रोग अन्वेषण..
१ सय ३२ केजी वोयर बाख्राको मूल्य साढे चार लाख रुपैयाँ, बैंकबाट ऋण लिएर बाख्रापालन
बनियानी । पछिल्लो समय युवामा कृषि पेशाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । कृषिबाट नाम र दाम कमाउन पनि सकिन्छ । सोही कृषि कार्यलाई व्यावसायिकता दिँदै झापा गोलधापका गणेश पराजुलीले उन्नत..
तीन हजार केराको बोट फाँडेको आरोपमा तीन पक्राउ
चितवन । पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिका–६ का किसानको केरा खेती फाँडेको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । चितवनका प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाका अनुसार कालिका नगरपालिका–७ बाट बुधबार उनीहरु पक्राउ..
महेन्द्रनगर । धनुषासहित तराईका जिल्लामा यसवर्ष आँप उत्पादनमा वृद्धि हुने भएको छ । यसवर्ष आँपको रुखमा सबैतिर मज्जर (आँपको फूल) बढी मात्रामा लागेको देखेर किसान हर्षित भएका छन् । क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–..
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज: थोरै क्षेत्रफल धेरै बाघ
भीमदत्तनगर । अहिले वसन्त ऋतुको याम छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको विशाल घाँसे मैदानको पश्चिमतर्फ सूर्यास्तको मनोरम दृश्यसँगै बाह्रसिङ्गेको झुण्ड सहजै देख्न पाइन्छ । पचपन्न वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो मुलुककै ठूलो..
शुक्रबारबाट अर्गानिक कृषि मेला सुरु हुने
काठमाडौं । अर्गानिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन आह्वान गर्दै शुक्रबारबाट ‘दोस्रो राष्ट्रिय अर्गानिक कृषि मेला’ सुरु हुने भएको छ । विहिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी मेलाबारे जानकारी गराइएको हो । ललितपुरको..
मन्त्री यादवको निर्देशनपछि चिनी उद्योगीले किसानको पैसा तिर्ने
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवको निर्देशनपछि चिनी उद्योगीले किसानलाई दिन बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने कार्यतालिका बनाएका छन्। चिनी उद्योगीले लामो समयदेखि पैसा नदिएको भन्दै देशभरका उखु किसानहरू..
चौँरी पालेर करोडपति बनेका कान्छा गुरुङ
मनाङ । नेपालका शहर होस् या ग्रामीण भेग सबैतिरका युवा विदेशिने लहर चले पनि मनाङका कान्छा गुरुङ भने चौँरी गोठमा रमाइरहेका छन्। मनाङको नेस्यङ गाउँपालिका–६, मनाङ गाउँका ३२ वर्षीय कान्छा गुरुङ..
पदमबहादुरले फालाए एउटै साढे चौध किलोको काउली
म्याग्दी । एउटा काउली सामान्यतया कति किलोको होला रु बढीमा २ देखि ५ किलोसम्म । तर म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–२, भगवतीका एक कृषकले एउटै बोटमा साढे चौध किलोग्राम तौल भएको काउली..
भारतले अदुवा निकासीमा लगाएको प्रतिबन्ध हटायो
इलाम । भारतले एक महिनादेखि अदुवा निकासीमा लगाएको प्रतिबन्ध हटेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल आएपछि उक्त प्रतिबन्ध हटेको हो । अदुवा निकासी खुलाउनेबारे बुधबार नेपाल र भारतीय पक्षबीच..
जलकुम्भी फाल्ने मेशिन पोखरामा
कास्की । पोखरा जाने पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र फेवातालमा रहेको जलकुम्भी झार र फोहोर निकाल्नका लागि अत्याधुनिक मेशिन ल्याइएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ५० लाख र पोखरा महानगरपालिकाको ७५..
सुन्न र बोल्न नसक्ने शशिराजको आम्दानी चार लाख रुपैयाँ
पाल्पा । रामपुरका युवा शशिराज डोटेल अपाङ्ग भए पनि छजनाको परिवार उनकै भरमा चलेको छ । उनी सुन्न र बोल्न सक्दैनन् तर पनि उनले गरेको तरकारी व्यवसाय सवलाङ्ग व्यक्तिभन्दा कुनै..
Results 344: You are at page2of 12